Ny fiarovan-tenan'ny vehivavy marevaka - volo, dantelina, kavina, kofehy, zioga, miaraka amin'ny dantelina, ho an'ny akanjo, palitao, sweater
Fitaovam-pandaminana - karazana, fomba fanamafisana, inona no tokony harahina ary ahoana no ahafahana mamorona sary maoderina?
Ny fiarovan-trosa dia malaza amin'ny vehivavy lamaody amin'ny fizaran-taona farany. Izany dia noho ny tsipiriany toy izany dia mora mifintina amin'ny singa samihafa ao amin'ny gara, ka mamorona isaky ny sary vaovao mahaliana, tsy toy ny taloha.
Ny fiarovan-tenan'ny vehivavy
Betsaka ny couturiers maro no mampiasa karazam-pandaminana samihafa ao amin'ny fanangonany. Ny modelin'izy ireo dia samy hafa arakaraka ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana, ny endriky ny fomba, loko. Azo atao ny manondro ireo toetra mampiavaka azy toy izany:
Miankina amin'ny karazana zavatra tadiavina hampiarahana azy ireo, ny kofehy dia azo atao amin'ny ririnina na fahavaratra fahavaratra. Ny akanjo na ny akanjo dia afaka mameno tsara ireo safidy vita amin'ny hoditra, ary akanjo maivana na blouses - modely tendro marefo. Ny kapaoty dia mety hameno ny ziogan'ny zipo.
Ny tombontsoa tsy azo antoka dia ny fahafahana mampifandray azy ireo amin'ny singa samihafa ao amin'ny gara, izay ahafahanao manova tsipìka tsikelikely amin'ny fahamendrehanao.
Ny vahaolana isan-karazany ampiasaina amin'ny famolavolana dia avela. Ohatra, ny collar iray azo havaozina dia azo zakaina amin'ny vato, paolo, vato rongony, embroidery. Misy ihany koa karazana laconic henjana tsy misy ny fisiana firavaka.
Ho an'ny vanim-potoana mangatsiaka, ny antsipiriany mahasalama dia mety ho volo mangatsiaka. Azo ampifandraisina amin'ny endriny amim-pahombiazana tokoa amin'ny zavatra toy izany ao amin'ny garderobe izany:
miaraka amin'ny akanjo mafana izay manana tendany kely. Amin'ny fararano amin'ny lohataona, ny sokajy ivelany toy izany dia azo atao amin'ny lanja maivana, ary amin'ny vanin-taona amin'ny ririnina, izay ampitaina amin'ny tendron'ny volom-borona, izay manome ny lanjany ny sary ary miaro amin'ny mangatsiaka;
Toy izany koa ity singa ity dia azo ampiasaina amin'ny akanjom-boninahitra vita amin'ny hoditra na lamba, manana tranokala matevina na vatosoa;
Ny fiarovan-tena amam-pirao am-bava dia hijery ireo fehezan-koditra iray izay azo hamehezana na hesorina amin'ny sitrapo;
Ny akanjo tsara indrindra dia ny akanjo vita amin'ny hoditra, ohatra ny valizy misy firavaka mitovy;
Ny tsipika mahatalanjona tsy hay hadinoina dia azo omanina tsy ho an'ny fitsangatsanganana eny an-dalambe, fa ao an-trano ihany koa. Izany dia tratra raha toa ny satroka fotsy lava loko mihidy amin'ny pataloha na pataloha .
Ny safidy mandresy handravahana ny akanjo rehetra dia ny fihodinam-bokatra manify, vita amin'ny lamaody marevaka. Afaka manana endrika boribory izy ireo na telo-polo ary mandry eo amin'ny tendan'ilay lahatsoratra na mifatotra eo ambanin'ny tendany, toy ny zioga. Izy ireo dia fitaovana ho an'ny fitaovana garderie manaraka:
Amin'ny akanjo vita amin'ny karazany maro, mety ho birao henjana izy ireo, na isan'andro na am-pitiavana;
eo amin'ny akanjom-boninahitra na akanjo misy vozona oval, mamela anao hametraka azy amin'ny endriny fanampiny.
Ny fiovaovana tena niavaka teo amin'ny famolavolana, izay nanolorana ny fiarovan-drakitra, dia toy ny zioga. Manana toetra miavaka toy izany izy io:
dia tsy natao fotsiny ho toy ny felam-boninkazo, fa koa ho toy ny fako, ho fiarovana amin'ny hatsiaka;
Misy modely mifandray amin'ny kofehy volon-koditra, izy ireo no maharesy rehefa mampiasa io fomba io. Safidy iray hafa dia vokatra vita amin'ny lamba;
Ny fiarovan-koditra marevaka dia mijery tsara ny kofehy, ny totozy, ary azo ampifandraisina amin'ny akanjo na akanjo. Ny akanjo manja-koditra dia azo atao amin'ny tendron'ny palitao na ny palitao.
Toe-tongotra azo havaozina
Mba hanampiana ireo akanjo hariva, ny kavina mahafinaritra miovaova, izay vita tsara tarehy vita amin'ny vato, dia tonga lafatra. Misy karazany toy izany ny endriny:
Afaka amboarina amin'ny fampiasana karazana vato na karazana vatokely hafa;
Ny vokatra dia azo avy amin'ny vatokely, mifamatotra tanteraka;
Misy ihany koa ny vahaolana amin'ny fampifangaroana vato sy kofehy vita amin'ny kofehy;
Ny fitaovana niavaka dia afaka manana endrika oval na triangular, ny vokatra faran'izay sarotra dia misy endri-tsoratra.
Ho an'ny fitsangatsanganana ao amin'ny birao, ny famolahana fotsy madinika, fantatra amin'ny hoe "rack", dia tonga lafatra. Ny tombontsoa ampiasainy amin'ny tombony azo antoka. Izany dia maneho amin'ny hoe fa afaka mifangaro amin'ny karazan'akanjo na akanjo rehetra izy ireo , manova ny sary amin'ny fahamendrehany. Amin'ny alalan'io fomba io, ny fahazarana mahazatra isan'andro dia azo omena endrika ofisialy.
Lasi rindrina lasi
Mba hanaovana ilay sary vehivavy sy amam-pitiavana, dia misy famolahana kofehy amin'ny dantelina novolavolaina. Ho lasa fehiloha mahomby amin'ny akanjo, akanjo, akanjo. Ny vokatra dia miavaka amin'ny toetra mampiavaka toy izany:
dia mety hanana lanjany hafa, avy amin'ny kely, tsy hita taratra, vita amin'ny endriky ny sodina, amin'ny volompotsy, mandrakotra ny faritra dekollete;
Ny fifandimbiasan'ny dantelina dia afaka manana karazan-javatra isan-karazany, vita amin'ny legioma, loko volomparasy na marika, miaraka amin'ny fanampiana ireo singa lehibe na kely;
Ny firavaka misy kofehy manify dia afaka manana rafitra boribory tsy tapaka izay ahafahanao manao azy fotsiny amin'ny lohanao, na mitaky famerana fanampiny, izay midika izany fa ilaina ny manja azy amin'ny kofehy.
Jabot kofehy marevaka
Manaova tsipika mahavariana sy tsy hay hadinoina, raha toa ka mampihatra tsangam-baton-tsokosoko tsara tarehy ianao. Misy karazana toetra toy izany izy io:
Ny jabot dia napetraka ho ampahany amin'ny tendron'ny kôlôtra mahazatra;
Ny safidy iray hafa dia ny fako, izay milahatra tsara ary mifatotra amin'ny akanjo vozon'akanjo;
Ny jabot dia azo zakaina amin'ny bokotra, vatosokay na vatokely.
Ny zazavavy nanapa-kevitra ny hividy zavatra vaovao, dia manontany tena hoe: inona no tokony hampiadiana ny fiarovan-tenan'ny vehivavy? Afaka mifangaro amin'ny zavatra maro ao am-bala izy ireo ary mamorona tsipìka isan-karazany miaraka amin'ny fanampiany, ka anisan'izany ireto manaraka ireto:
Ny sary eo amin'ny sehatra, dia hita fa, raha mampiasa ny style "rack" ianao, izay ho vinavina organika ho an'ny akanjo, blouses, akanjo henjana miaraka amin'ny tendany ambany, jumper na sweater izay mifandraika amin'ny birao akanjo.
Ny tsipìka amam-pitiavana, kiraro fitaratra na jabos dia tena tsara ho azy. Azon'izy ireo atao amin'ny akanjo marevaka marevaka izay manana fehikibo mivaingana na miparitaka, mofomamy malefaka, satra na satin-jiro.
Ny sary andavanandro dia mora ampitomboina amin'ny modely rehetra, ny ambony dia mifidy mifanaraka amin'ny tsiro tsirairay, satria ny ampahany ambany dia afaka mamorona jeans amin'ny karazany rehetra: sipa , skinnies, akanjo kiraro.
Ny tsipika hariva dia hahomby kokoa raha ampidirinao amin'ny vokatra vita amin'ny vato. Izy io dia tonga amin'ny akanjo vita amin'ny velvet, satin, sehatra ary hanao zavamaniry miaraka aminy. Ny fepetra tokana dia sehatra iray mihidy, ny fitaovana toy izany dia hijery ivelan'ny toerana misy faritra mihidy.
Saron-tadidy azo tsaboina amin'ny akanjo
Ireo vehivavy vehivavy tia ny tsipìkany amin'ny ankapobeny dia afaka mampiasa haran-damba ho an'ny akanjo. Izy ireo dia miseho amin'ny karazana modely toy izany:
Miasa am-patana na dantelina izay hahatonga ilay sary ho malefaka sy hodiavina. Izy ireo dia hifanaraka amin'ny akanjom-boninahitra nasondrotry ny fitafiana akanjo tsara tarehy. Hamafiso ny fiantraikan'ny fiharian-behivavy, raha manamboatra ny akanjo miaraka amin'ny satroka vita amin'ny fomba mitovy sy avy amin'ny zavatra mitovy.
Ny fanaovana akanjo tsy hay hadinoina sy mahagaga dia azonao atao, raha mampihatra ny fomba jabot ianao. Azony atao ny manova ilay sary ary manome azy vaovao vaovao.
Ho an'ny akanjo fandraharahan'ny orinasa, ny "rack" ho an'ny fiarakodia dia ho ampiana tsara indrindra, noho izany ny akanjo dia mora hita na dia ny akanjo henjana indrindra.
Firavaka marevaka eo amin'ny palitao
Amin'ny vanin-taona amin'ny ririnina, dia mety tsara ny kofehy marevaka amin'ny rongony. Manome fahafahana hanova ilay sary miankina amin'ny toetr'andro. Amin'ny toetr'andro mafana, afaka mamela ny tendany misokatra, ary miaraka amin'ny akanjo mangatsiaka mangatsiaka. Ny vokatra dia mety ho kely ny halavany ary manoloana ny tendany na ny haben'ny habeny ary tsy manasitrana ny tendany, fa ny tratra ihany koa. Amin'io tranga farany io, mahatonga ny sary tena mahavariana.
Amin'ny fararano amin'ny lohataona na ririnina, ny paompy misy rantsana miovaova no vahaolana tsara indrindra. Azonao atao ny manamarika ireo karazan-javamaniry toy izany:
miaraka amin'ny lamosina misy saron-tratra, izay mety mifanandrify amin'ny loko sy ny fomba fitongilanana miaraka amin'ny sweater na mampiavaka azy mifanandrify;
Ny safidy "rack" dia ho lasa fanampiana ara-biôlôjika amin'ny tsipika birao ary hanamboatra paompy maingoka mitam-piadiana vita amin'ny kofehy malefaka;
Ny romanticism dia mahavita zavatra mamoafady izay mety hodiovina amin'ny kofehy na vita amin'ny dantelina.
Fomba hanamboarana ny fiarovan-drakitra
Vehivavy lamaody maro izay nameno ny efitranony miaraka amin'ny tsipiriany vaovao dia manontany tena hoe: ahoana no fomba hanamboarana ny lambam-pandidiana sy ny kavina? Misy fomba hamahana azy ireo amin'ny akanjo:
Ny vokatra izay mampifandray ny eo aloha dia afaka mamatotra kofehy, toy izany koa, azonao atao ny manamboatra sy manodina;
Azonao atao ny mametraka ireo ampahany ireo amin'ny alalan'ireo bokotra tsy hita maso;
Indraindray dia ilaina ny mandrindra ny volombava sy ny mofomamy, mifatotra amin'ny bokotra kely;
Misy safidy izay mipetraka malalaka ary mitazona ny endriny amin'ny endriny, ireo vokatra ireo dia miakanjo amin'ny tendany.
Impulse 100 beatsin'ny minitra - inona no tokony ataoko?
Iza no mandeha amin'ny loko mena?
Ny fitomboan'ny taovam-pananahana sy ny ovy
Ahoana ny famokarana chickpeas?
Ny hypnosis an'i Erickson - inona izany, ny fitsipika fototra, ny fomba sy ny teknika
Krizin'izao tontolo izao - ny antony sy ny vokany
Ahoana no hitondrana kiraro?
Ahoana no hamaritra ny appendicitis amin'ny zaza?
Kitapo ho an'ny sisin-drakitra
Maingan-tsakafo hohanina ao anaty lafaoro?
Ahoana no ahazoan'ny olona iray amin'ny fahaketrahana?
How to Die Cersei Lannister: Lena Hidi manohy manitikitika ny mpankafy
Prasicides ho an'ny kambana
Doors ao amin'ny Provence style